Avia, Tompoko Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-02 > Avia, Jesosy Tompo
Ny fiainana eto amin'ity tontolo ity dia mameno antsika be ahiahy. Misy ny olana na aiza na aiza, na amin'ny zava-mahadomelina, amin'ny alàlan'ny fifindra-monina amin'ny olona hafahafa na noho ny olana ara-politika. Eo ihany koa ny fahantrana, ny aretina tsy azo sitranina ary ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany. Misy ny pôrnôgrafia amin'ny zaza, ny fanondranana olona ary ny herisetra tsy ara-dalàna. Ny fihanaky ny fitaovam-piadiana niokleary, ny ady ary ny asa fampihorohoroana dia mampanahy. Toa tsy misy vahaolana ho azy raha tsy hoe ho avy tsy ho ela i Jesosy. Tsy mahagaga àry raha maniry sy mangataka ny fiavian'i Jesosy fanindroany ny kristiana: "Avia, Jesosy, andao!"
Matoky ny fiverenan’i Jesosy nampanantenaina ny Kristianina ary manantena ny fahatanterahan’io faminaniana io. Ny fandikana ny faminaniana ao amin’ny Baiboly dia hita ho raharaha sarotra satria tanteraka tamin’ny fomba tsy nampoizina. Na ny mpaminany aza tsy nahalala izay tokony hatao. Tsy fantatr’izy ireo, ohatra, hoe ahoana no hahaterahan’ny Mesia amin’ny maha-zaza azy, ka ho olombelona no Andriamanitra (1. Petrus 1,10-12). Amin’ny maha Tompo sy Mpamonjy antsika, amin’ny fomba ahoana no ahafahan’i Jesosy mijaly sy maty noho ny fahotantsika ary mbola ho Andriamanitra? Rehefa tena nitranga ilay izy vao azo takarina. Tsy nahazo izany anefa ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny Fariseo nahita fianarana. Tsy nanaiky an’i Jesosy tamin-katsaram-panahy izy ireo, fa nitady hamono azy.
Mety ho mahaliana ny maminavina hoe ahoana no hahatanterahan’ny faminaniana amin’ny hoavy. Fa ny fametrahana ny famonjena antsika amin'ny alalan'ireo fandikana ireo dia sady tsy fahendrena no tsy fahendrena, indrindra mikasika ny andro farany. Isan-taona, ireo mitonona ho mpaminany dia manambara mialoha ny daty voafaritra tsara hiverenan’i Kristy, kanefa hatramin’izao dia diso avokoa izy rehetra. Fa nahoana izany? Satria ny Baiboly dia efa nilaza tamintsika foana fa tsy fantatsika ny fotoana, na ora, na andro ho an’ireo zavatra ireo ( Asa 1,7; Matio 24,36; Marka 13,32). Mandre ny Kristianina iray hoe: “Miharatsy hatrany ny toe-draharaha eto amin’izao tontolo izao! Azo antoka fa miaina ao anatin'ny andro vitsivitsy isika izao ». Ireo hevitra ireo dia niaraka tamin’ny Kristianina nandritra ny taonjato maro. Samy nahatsapa ho toy ny niaina tao anatin'ny andro vitsivitsy izy rehetra - ary mahagaga fa marina ny azy. Nanomboka tamin’ny nahaterahan’i Jesosy ny “andro farany”. Izany no nahatonga ny kristiana hiaina amin’ny andro farany hatramin’ny fiavian’i Jesosy voalohany. Rehefa nilaza tamin’i Timoty i Paoly fa “ho avy ny andro mahory amin’ny andro farany.” (2. Timoty 3,1), tsy niresaka momba ny fotoana na andro voafaritra ho avy izy. Nanampy i Paoly fa amin’izao andro farany izao, dia hihevi-tena ho ambony ny olona ka ho tia vola, lozabe, mpanevateva an’Andriamanitra, tsy mahay mankasitraka, tsy mamela heloka, sy ny sisa. Avy eo dia nampitandrina izy hoe: “Ialao ny olona toy izany” (2. Timoty 3,2-5). Mazava ho azy fa tsy maintsy nisy ny olona toy izany tamin'izany fotoana izany. Nahoana i Paoly no nanome toromarika ny fiangonana mba hanalavitra azy ireo? Ao amin’ny Matio 24,6-7 Lazaina amintsika fa hisy firenena hitsangana hiady, ary hisy ady maro. Tsy zava-baovao izany. Oviana no nisy fotoana tsy nisy ady teto an-tany? Ratsy foana ny fotoana ary miharatsy hatrany ny zava-misy fa tsy mihatsara. Manontany tena isika hoe manao ahoana ny faharatsiana alohan'ny hiverenan'i Kristy. tsy haiko izany.
Nanoratra toy izao i Paoly: “Fa amin’ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka, dia miha-ratsy kokoa izany.” (2. Timoty 3,13). Na dia ratsy aza izany, dia nanohy toy izao i Paoly: “Fa ianareo kosa dia mitoetra amin’izay nianaranao sy nankinina taminao.” (2. Timoty 3,14).
Raha lazaina amin’ny teny hafa, na dia ratsy toy inona aza izany, dia tokony hanohy hihazona ny finoana an’i Kristy isika. Tokony hanao izay fantatsika sy ianarantsika avy amin’ny soratra masina amin’ny alalan’ny Fanahy Masina isika. Eo anivon’ny faminanian’ny Baiboly, Andriamanitra dia milaza mandrakariva ny olona mba tsy hatahotra. "Aza matahotra!" (Daniela 10,12.19). Ny ratsy no hitranga, fa Andriamanitra no manapaka ny zavatra rehetra. Hoy i Jesosy: “Izany no nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Eto amin'izao tontolo izao ianao dia matahotra; fa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao » (Jaona 16,33).
Misy fomba roa hijerena ny teny hoe "Avia Jesosy, avia". Ny iray dia maneho ny faniriana ny fiverenan'i Kristy. Ny faharoa, ny fangataham-bavaka ataontsika, ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy hoe “Amena, eny, avia Jesosy Tompo ô!” (Apokalypsy 22,20).
«Natetrako aminao ny foko ary haka ny tranoko. Ampio aho hahafantatra anao bebe kokoa. Omeo ahy ny fiadananao ao amin'ity tontolo feno herisetra ity ».
Handao fotoana bebe kokoa hivelomana amin'ny fifandraisana manokana amin'i Kristy! Avy eo tsy mila miahiahy momba ny faran'ny tontolo isika.